GitHub Copilot, mpanampy amin'ny faharanitan-tsaina amin'ny kaody fanoratana | Avy amin'ny Linux
Natolotra GitHub andro vitsy lasa izay dia fiasa vaovao antsoina hoe «GitHub Copilot»Izay tokony hanamora ny fiainana ny mpandahatra fandaharana ary araka ny tondroin'ny anaran'ity asa ity dia tompon'andraikitra amin'ny fandinihana ny kaody miaraka aminao izy, izany hoe, manolotra mpamosavy mahay mahay mamorona fananganana mahazatra rehefa manoratra kaody.
Ny rafitra novolavolaina niaraka tamin'ny tetikasa OpenAI ary mampiasa ny sehatry ny fianarana milina OpenAI Codex, voaofana amin'ny kaody loharanom-pahalalana marobe isan-karazany nampiantranoina ao amin'ny toeram-pivarotana GitHub ho an'ny daholobe.
Androany, mamoaka topi-maso ara-teknika momba ny GitHub Copilot , programmer an'ny mpivady AI vaovao izay manampy anao hanoratra kaody tsara kokoa. Ny GitHub Copilot dia mamoaka ny teny manodidina ny kaody izay iasanao, milaza ny tsipika feno na ny fiasa feno.
GitHub Copilot tsy mitovy amin'ny rafitra famitana kaody nentim-paharazana noho ny fahaizana mamorona kaody saro-bidy, hatreto amin'ireo asa vonona hampiasaina namboarina rehefa dinihina ny zava-misy ankehitriny. Araka ny Copilot dia asan'ny AI izay nianatra tamin'ny alàlan'ny kaody kaody an-tapitrisany maro ary manaiky ny zavatra kasainao miorina amin'ny famaritana ny fiasa sns.
Ohatra, raha te-hamorona fiasa mi-tweet ianao dia ho tsikaritr'i Copilot izany ary hanome ny kaody ho an'ny fiasa iray manontolo, satria azo antoka fa efa ampy ireo mpandahatra programa taloha izay efa nanoratra asa tahaka izany. Ilaina izany satria mahavonjy anao amin'ny fahitana ohatra amin'ny sombin-kaody hafa.
Manampy anao hahita fomba hafa haingana hamahana olana, hanoratra fitsapana ary hijery API vaovao ianao nefa tsy mila manamboatra ny valiny amin'ny Internet. Rehefa manoratra ianao dia mifanaraka amin'ny fomba fanoratanao kaody, hanampiana anao hamita haingana kokoa ny asanao.
Ohatra iray hafa, raha misy ohatra ny rafitra JSON ao amin'ilay hevitra, rehefa manomboka manoratra asa ianao hamakiana ity rafitra ity, GitHub Copilot dia hanolotra kaody ivelan'ny-boaty, ary rehefa manoratra ny mpampiasa mamerimberina fanazaran-tena mahazatra. , hamorona toerana sisa tavela io.
Amin'izany isika dia afaka mahatakatra fa GitHub Copilot izy io dia mifanaraka amin'ny fomba fanoratan'ny mpamorona kaody sy ny kaonty momba ny API sy ny rafitra ampiasaina ao amin'ilay programa.
Araka ny GitHub, "mahay kokoa noho ny famoronana GPT-3 amin'ny famoronana kaody io." Satria efa nofanina tamina databata misy kaody loharanom-pahalalana bebe kokoa izy io, ny OpenAI Codex dia tokony hahafantatra bebe kokoa ny fomba fanoratan'ny mpamorona kaody sy hahafahany mandefa endrika marina kokoa.
OpenAI Codex dia manana fahalalana be dia be amin'ny fomba fampiasan'ny olona kaody ary tena mahay kokoa noho ny GPT-3 amin'ny famokarana kaody, amin'ny ampahany satria nofanina amina tahirin-kevitra izay misy fangejana kaody loharanom-bolam-bahoaka be lavitra kokoa.
Amin'ny ho avy dia kasaina hanitatra ny isan'ireo fiteny sy rafitra fampandrosoana anohanana. Ny asan'ny plugin dia atao amin'ny alàlan'ny fiantsoana serivisy ivelany izay mihazakazaka eo amin'ny lafiny GitHub, izay ankoatry ny zavatra hafa, nafindra ny atin'ny rakitra voahitsy miaraka amin'ny kaody.
Farany, tsara ny manamarika fa ny foto-kevitry ny zavatra iray izay tena famaranana kaody mandeha ho azy mifototra amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy dia tsy vaovao tanteraka, satria ohatra i Codota sy i Tabnine dia efa nanolotra zavatra nitovy nandritra ny fotoana ela, ankoatry ny fampifangaroana ny hetsika ataon'izy ireo ary farany volana dia nanaiky an'i Tabnine ho marika lehibe izy ireo.
Azontsika atao koa ny manonona Microsoft izay nanolotra endrika vaovao, Power Apps, izay mampiasa ny maodely amin'ny fiteny OpenTI GPT-3 hanampiana ireo mpampiasa hisafidy ny raikipohy marina.
Raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, azonao atao ny manamarina ny antsipirihany amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » GitHub Copilot, mpanampy amin'ny faharanitan-tsaina amin'ny kaody fanoratana
Taorian'ny fividianana Audacity dia mamela ny fanangonana angon-drakitra ho tombontsoan'ny manampahefana ao amin'ny governemanta izao ny fampiharana